ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်: နားဆင်ခံစား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ (၃၀)
***ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ရောက်လာသူအားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ***ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်သည် မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖေါက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများအား ထာဝစဉ်ရှင်သန်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် *** ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရပ်မြေ ပခုက္ကူမြို့သို့လည်း လာလည်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် *** နားဆင်ခံစား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ (၃၀)
တွံတေးသိန်းတန် ရွှေဓါတ်ပြားတေး အမှတ် (၇)
01 ရှင်နဲ့ ကျွန်မ 02 ကိုကိုကောလိပ်ဂျင် 03 မြှားနတ်မောင် 04 အငြိမ့်သမလေးရဲ့ ဖူးစာ 05 ဇော်ဆိုဇော်ပဲ 06 ကိုကိုမျက်နှာ 07 တောရွာလေး 0...
မအေးပွင့် မြင့်မြင့်စန်း လမ်းသုံးဆယ် (ဇာတ်လမ်း)
ပထမလူ ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာ
အောင်သူ ကလေးဆိုး (၁၉၉၅)
ဂီတာဖေ၀င်း မျက်ရည်တပေါက်ရဲ့ တန်ဖိုး
အေ၀မ်းတင်တင်လှ နှင့် ခင်သစ်လွင်တို့၏ တေးများ
မေရွက်ဝါ ရွှေတချောင်းရဲ့ရင်းလှိုင်းခတ်သံ
အနိုင် မဆိုစကောင်း ဆိုစကောင်း
ဇော်ဝမ်း ၅ မိနစ် အလို
ဗိုဟိန်း၊ ဘိုမ စောကလျာ
၀င်းဦး မြန်မာဟန် မြန်မာသံ
ဟေမာနေ၀င်း ရွှေဓါတ်ပြား (၃)
ဟေမာနေ၀င်း ရွှေဓါတ်ပြား အမှတ် (၂)
ဟေမာနေ၀င် ရွှေဓါတ်ပြား အမှတ်(၁)
အိဖြူ တေးပုလဲ ၉၁
အနိုင် လက်ရွေးစင် (၁)
ရီရီသန့် နေညိုရင် ရွှေဘိုကိုလွမ်းတယ်
တွံတေးစိုးအောင် ကိုကိုလို့ ခေါ်ပါ
မင်းဂျွန်စိုး. နိုင်မင်းအောင်. ဇော်အားမာန်..ကျောကေ...
အဖွဲ့ မင်းဂျွန်စိုး ဂီတသက်တမ်း (၁၆) နှစ်ပြည့်
ဓနုဖြူဇော်ဦး၊ ပန်ဆုပြည့်ကျော် မောင်ရွှေရိုးနဲ့ ခ...
နားဆင်ခံစား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ (၃၀)
အိဖြူ ပုလဲသွယ် (တေးပုလဲ ၉၅)
ဖြူသီ ( စုံတွဲအဆို - ရာဇာဝင်းတင့်၊ ဂရေဟမ်၊ ရတနာဦး ...
ရွှေတောင်ကြားမှာ မပျော်ပါ ၊ ဖိုးဇော်လမ်းပေါ်မှာ
အဖွဲ့ ​မေတ္တာ​လျှော်​​ကြေးမ​တောင်းလိုပြီ ​
ဆိုင်း -ရွှေပြည်၇န်နိုင် (ဆို -နှင်းရည်သန့် ၊စိန်ဓူ...
သူဇာအောင် မယ်မင်းကြီးမ - စုံတွဲအဆို - ဖိုးသောကြာ ၊...
မုံရွာစိန်ထွန်းဝေ ပွဲတိုင်းကျော် ဆိုင်းဧည့်ခံအလှုသီ...